သိုက်£ 10 get 25 Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ် spins
ဒီမြှင့်တင်ရေးတက်ကြွနေ့စဉ် 3rd ဒီဇင်ဘာလတွင်ဖွစျလိမျ့မညျ 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
အဆိုပါဗိုင်းငင် Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ် 20p တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 25 သာ Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
သင်အပိုဆု Code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီမြှင့်တင်ရေးကိုသာထိုနေ့၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ “GONZO25”
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The
Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, လူးစ Hendrix, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Motorhead, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
သိုက်£ 10 get 10 Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ် spins
ဒီမြှင့်တင်ရေးတက်ကြွနေ့စဉ် 2nd ဖြစ်လိမ့်မည်, 10ကြိမ်မြောက်နှင့် 17 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဤရွေ့ကားလှည့်ဖျားသာ Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ် 20p တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 10 Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
သင်အပိုဆု Code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီမြှင့်တင်ရေးကိုသာထိုနေ့၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ “GONZO10”
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, လူးစ Hendrix, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Motorhead, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
50% £ 100 အထိတက်ပွဲစဉ်
ဒီမြှင့်တင်ရေး 7th, ဒီဇင်ဘာလအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမားမြှင့်တင်ရေး၏နေ့၌£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းရပါမည်.
တစ်ဆုကြေးငွေ 50% ၏£ 100 အမြင့်ဆုံးရန်သင့်သိုက်တက်သင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
သင်ဆုကြေးငွေ code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီဆုကြေးငွေကိုမြှင့်တင်ရေးကာလ၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည် “ငါးဆယ်”
ဒီမြှင့်တင်ရေးကိုသာမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းတစ်ကြိမ် activated နိုင်ပါတယ်.
သိုက်£ 10 get 50 Gonzo လှည့်ခြင်းများ
ဒီမြှင့်တင်ရေး 23 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည် 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 50 Gonzo ရှာပုံတော်အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.
သင်အပိုဆု Code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီမြှင့်တင်ရေးကိုသာထိုနေ့၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ “GONZO50”
200% £ 40 အထိယှဉ်ပြိုင်ကစား
ဒီမြှင့်တင်ရေး 4th အပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည်, 13ကြိမ်မြောက်, 16ကြိမ်မြောက်နှင့် 21 ဒီဇင်ဘာလတွင် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
တစ်ဆုကြေးငွေ 200% ၏£ 40 ဦးရေအများဆုံးရန်သင့်သိုက်တက်သင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
သင်ဆုကြေးငွေ code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီဆုကြေးငွေကိုမြှင့်တင်ရေးကာလ၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည် “200”
100% £ 100 အထိတက်ပွဲစဉ်
ဒီမြှင့်တင်ရေး 1st အပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည်, 5ကြိမ်မြောက်, 8ကြိမ်မြောက်, 15ကြိမ်မြောက်နှင့် 22 ဒီဇင်ဘာလတွင် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
တစ်ဆုကြေးငွေ 100% ၏£ 100 အမြင့်ဆုံးရန်သင့်သိုက်တက်သင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
သင်ဆုကြေးငွေ code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီဆုကြေးငွေကိုမြှင့်တင်ရေးကာလ၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည် “100”
သိုက်£ 10 get 25 Starburst လှည့်ခြင်းများ
ဒီမြှင့်တင်ရေးတက်ကြွနေ့စဉ်6နှင့် 12 ဒီဇင်ဘာလတွင်ဖွစျလိမျ့မညျ 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဤရွေ့ကားလှည့်ဖျားသာ Starburst အပေါ် 10p တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 25 Starburst အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
သင်အပိုဆု Code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီမြှင့်တင်ရေးကိုသာထိုနေ့၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ “STAR25”
အလှည့်ခြင်းများကစားသမားကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက် Starburst ကိုဖွင်ရမယ်
300% £မှ 30 အထိယှဉ်ပြိုင်ကစား
ဒီမြှင့်တင်ရေး 9th နှင့် 19 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
တစ်ဆုကြေးငွေ 300% ၏£ 30 အမြင့်ဆုံးရန်သင့်သိုက်တက်သင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
သင်ဆုကြေးငွေ code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီဆုကြေးငွေကိုမြှင့်တင်ရေးကာလ၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည် “300”
10 အခမဲ့ Starburst လှည့်ခြင်းများ
ဒီမြှင့်တင်ရေး, ဒီဇင်ဘာလတက်ကြွနေ့စဉ် 18 ဖြစ်လိမ့်မည် 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
အဆိုပါလှည့်ဖျားသာ Starburst အပေါ်တန်ဖိုးရှိ 10p နှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 10 Starburst အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
သိုက်£ 10 get 100 Starburst လှည့်ခြင်းများ
ဒီမြှင့်တင်ရေးတက်ကြွနေ့စဉ် 14 ဖြစ်လိမ့်မည်, 20ကြိမ်မြောက်နှင့် 24 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
တစ်ဆုကြေးငွေ 100 လှည့်ဖျားသင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 100 Starburst အပေါ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
သင်အပိုဆု Code ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီမြှင့်တင်ရေးကိုသာထိုနေ့၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ “STAR100”